‘UZuma uhlela ukubulala labo angavumelani nabo’ – EFF | isiZulu
‘UZuma uhlela ukubulala labo angavumelani nabo’ – EFF
'Abantu besimame bantekenteke kakhulu ukuthi bangahola izwe'
'Abantu kumele bayeke ukuzonda uMengameli Zuma'
Libhodla umlilo ihhovisi likaMengameli ngamazwi kaMadonsela
Cape Town – UMengameli wezwe, uJacob Zuma, usethole okukhulu ukugxekwa ngemuva kokuthi egunyaze ukutshalwa kwamasosha angu-441 azosiza amaphoyisa ukugcina “umthetho” uma ethula inkulumo yakhe ayibhekise ezweni, iState of the Nation Address (SONA) ngoLwesine.
Lesi sinyathelo sikaMengameli kubukeka sengathi esehlanga neze kahle kwabamaqembu aphikisayo kanye nezinhlangano ezahlukene zomphakathi.
OLUNYE UDABA: 'Abantu kumele bayeke ukuzonda uMengameli Zuma'
“Siyasigxeka lesi senzo njengokuphakwa kwamasosha kubantu baseNingizimu Afrika. Kumele kubukeke njengokuphakwa kwempi kwizakhamuzi, okusho ukuthi uZuma uhlela ukubulala labo aphikisana naye kuSONA,” kusho okhulumela i-EFF, uMbuyiseni Ndlozi.
UNgqongqoshe wezokuPhepha eWestern Cape, uDan Plato, uchaze lokhu kutshwalwa kwamasosha angaka njengenhlamba kwizakhamizi zakulesi sifundazwe ezihaqwe ubugebengu bezigelekeqe nezihlale zithuka izanya nsuku zonke ngenxa yokwesaba.
Kusenjalo inyunyana yamavikelambuso i-SA National Defence Union (Sandu) ithe ukutshalwa kwamasosha ephalamende akuhambisani noMthethosisekelo.
Ngokusho kukaJeff Dubazana okhulumela le nyunyana, kunenqubo okumele ilandelwe kodwa ayizange ilandelwe.
“Kumele ngabe kukhishwe uphawu olubiza amasosha ngokusemthethweni, lolu phawu luyincwajana enikezwa amasosha uma ebizelwe endaweni ethile. Amasosha awazange ayithole le ncwadi, kodwa atshelwa ngomlolo kuphela,”kusho uDubazana.
Uvelile umlimi owagandaya ngeveni owe-EFF eN Cape
Uvelile enkantolo namuhla umlimi ngecala lokuzama ukubulala ngezinsolo zokugandaya ngeveni ilungu le-EFF elalibalekela amaphoyisa ngesikhathi kubhikishelwa izidingo zomphakathi.
Lithole ibheyili iphoyisa elisolwa ngokubulala umkalo
Lidedelwe ngebheyili yemali engu-R5 000 iphoyisa ebeselisebenze embuthweni wamaphoyisa njengoWarrant Officer iminyaka engu-26 ngezinsolo zokubulala umkalo ngo-2016.
Kutholakale izidumbu ezintathu ezishile ehlathini ePort Elizabeth
Amaphoyisa asePort Elizabeth aqalise uphenyo ngemuva kokutholakala kwezidumbu ezintathu ezitholwe emahlathini eWells Estate.